Injinar Simanyaw: Bu'aan qorannoo ajjeechaa injinar Simmanyaw ifa taasifame - BBC News Afaan Oromoo
Injinar Simanyaw: Bu'aan qorannoo ajjeechaa injinar Simmanyaw ifa taasifame
Hogganaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa duraanii Injinar Simmanyaw Baqqalaa addabaabayii Masqalaa magaalaa Finfinneetti ALI Adoolessa 19 ofumaan kan ofi ajjeessan ta'uusaa adda baasuu poolisiin ifa taasise.
Ibsa har'a gareen poolisii faderaalaa taasiseen, haalli ajjeechaa kunis haala boodatti harkafannaa adeemsa hojii hidha guddichaatiin wal qabatee dhiibbaa isaan irra gahaa ture irraa kan ka'e ta'u ibsaniiru.
Ibsa kanarratti daayireektarri jeneeraalaa poolisii federaalaa Zaynuu Jamaal waan jedhan, bu'aan qorannoo marroo duraa kun waanti agarsiisu, injinarichi nama biraatiin akka hin ajjeefamnedha.
Ragaaleen hanga ammaatti xalayaawwan ofii isaaniin barreessaniifi namoota waliin hojjatan irraa hubatameen haaluma kana kan mirkanneessan ta'uu himaniiru.
Goodayyaa suuraa Komishinar Zaynuu Jamaal
Xalayaawwanii fi yaadannoon konkolaataa isaanii keessatti argaman odeeffannoowwan hojii guyyuun kan walqabatan akka ta'anii fi du'asaanii waliin kan walqabatan akka hintaane poolisiin beeksiseera.
Waa'ee du'a Injinar Simmanyaw amma dura waan beeknu
Keessattuu ragaan barreessituu isaanii irraa argame akka mul'isutti, mucaa isaanii gaafattuuf adaraa jechaa turuusaanii barreessituu irraa hubatameera.
Kana malees, yaadannoo poostaa isaanii keessaa argameen maaliif akka of ajjeessan qabatamaan kan kaa'an akka hinjirre kan dubbatan poolisoonni, waa'ee mucaa isaanii adaraa jechuu turuu baramuusaa himaniiru.
Mucaa isaanitiinis galgala gaafa itti du'aniin duratti, 'adaraa cimii baradhu,' jechuun cimsanii gorsaafi osoo hindu'iin daqiiqaa jahaan duras bilbilaniif akka turan galmee bilbila isaanii irraa baramuu gareen poolisii kun ibseera.
Kanaanis haala walqabateen qorannoon gadii fageenyaa gaggeeffamaa jiraachuu isaas dabaluun ibsaniiru.
Ibsichaan boodas gaaffii maaliif ture? jechuun gaafatamaniif deebiin kennameera.
Guyyaa awwaalcha Injiinarichaatti mana jireenyaa isaanii hatuuf yaaliin taasifamuu isaafi poolisiin to'annaa jala olfamuulleen himaniiru.
Kana malees, haala qorannoo du'a injinarichaa keessatti gareen FBI dhimma haala qorannoo biyya keessaatiin mirkanneessuun rakkise irratti hirmaachisuu isaas himaniiru.
Haala du'aatii injinarichaa waliin eenyutuu walitti dhufeenya qaba kan jedhu irratti gara fuuladuraatti gadi fageenyaan qoratamee ifa kan taasifamu ta'us himaniiru.
Injinarichi Adooleessa 19 ganama barii sa'aatii 12:45'tti manasaaniitii bahan
Sa'aatii 1tti Addababayii Masqalaatti mullataniiru
Sa'aatii 1:05 hanga 1:45tti waajjirasaanii keessa turan
Turtiisaanii kana keessa gara mana boolii deddeebi'aa turan
Shufeera isaanii lamaan keessaa isa tokkoof poostaa saamsame keenaniif
2:21 irratti konkolaataa isaanitti deebi'an
2:30 irratti poolisiin iddoo sana gaheera
Konkolaataa keessa poostaawwan lamaa fi shigguuxiin isaanii argameera
Raasaasni shigguuxii kana keessaa dhukaafamees achuma keessaa argameera
Waa'ee du'a Injinar Simmanyaw hanga ammaatti waan beeknu
Hogganaan hidha Abbayyaa Injinar Simmanyaw Baqqala eenyu turan?
Viidiyoo Sirna awwaalcha injinar Simmanyaw Baqqalaa